Madaxweyne Farmaajo “Kobaca dhaqaalaha waxa uu ku xiran yahay Argagixisada oo laga adkaado” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Farmaajo “Kobaca dhaqaalaha waxa uu ku xiran yahay Argagixisada oo laga...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa wareysi uu siiyay Wargeyska Sharqul Awsad, ee kasoo baxa Magaalada London, waxa uu kaga hadlay Arrimaha Soomaaliya oo ay ka mid tahay dagaallada ka dhanka Kooxaha Argagixisada.
Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa carabka ku dhuftay in uu dhaxlay Dal xaaladiisa ammni, tan siyaasadeed iyo dhaqaale ay adag tahay, Isaga oo intaasi ku daray in Dowladdu ay ka shaqeeneyso sidii Dalka looga qaadi lahaa cunaqabateynta Hubka.
Madaxweynaha ayaa amaanay doorka Dowladda Sacuudiga ay ka qaadaneyso arrimaha Soomaaliya, isaga oo sheegay in ay ka wada hadleen ladagaalanka argagixisada, dib u dhiska Ciidamada, kaabayaasha dhaqaalaha iyo kabida Miisaaniyada Dowladda.
Previous articleXukuumadda oo wadda qorshe lagu mideynayo Mushaarka Ciidanka.
Next articleDowladda Federaalka oo shaacisey in waqtiga shaqada ee Ramadaanka uu yahay 9am to 3pm